Ukusengwa Kwezimbuzi Zobisi
Ukukhiqiza ubisi lwezimbuzi kuphakama ngenyanga yokuqala noma amabili ngemva kokubamba. I-colostrum, ubisi lokuqala obusuka kumbele, kubalulekile ekuzivikelweni komzimba wezinyane lembuzi. Izingane zingasuswa kumama emva kwesonto futhi zikhuliswe ngokwehlukana, cishe ku-1 ilitha yobisi ngosuku, izakhamuzi zobisi zingasetshenziswa futhi. I-goat ye-Saanen ephakama ephezulu ingayikhiqiza i-1 200 l yobisi ngaphezu kwenyanga eyishumi. Imveliso yokuphila yembuzi ixhomeke ekuzaleni kwayo, ubisi, isivuno (ithola i-mastitis) nokuma komzimba njengobunzima obuqinile kanye nemilenze enamandla.
Izinsizi Zokusenga Izimbuzi
Ukuze ubisi izimbuzi omunye udinga indawo ehlanzekile ebisi, amanzi kanye nebhakede elihlanzekile kuyadingeka. Ukuma kwe-milking nakho kungathengwa. Ukubamba kufanele kube yinto ejabulisayo yezimbuzi - ubanike ukudla ngenkathi uhamba. Izimbuzi zobisi kufanele ziphathwe ngobumnene futhi zinakekelwe.
Ukubamba ngesandla kunzima kakhulu futhi umnikazi we-milker angaba yikhathele kakhulu uma ebhekene nezimbuzi isikhathi eside kunamahora amabili. Cabanga ukuthenga umshini wokubamba kodwa qaphela ukuthenga umshini, okungahle ube mncane kakhulu. Ubisi kufanele bukhohliwe ngokushesha ngangokunokwenzeka ku-4 ° C. Uma kwenzeka ubisi obuningi bethenga ukuthenga itangi lokupholisa elikhulu ngokwanele ukuze kutholakale ukukhiqizwa ubisi oluzayo olwandayo.
Njenganoma yiluphi uhlobo lobisi, ukuhlanzeka kubaluleke kakhulu. Ubisi kumele luhlanzeke ngangokunokwenzeka futhi kufanele lukhohliwe phansi futhi lugcinwe ku-4 ° C.Kukhona njalo amabhaktheriya ebisi oluhlaza, ngakho-ke imikhuba yokuhlanzeka ilandelwa ngokuqinile. Ngaphandle kokuba ubisi lube lubandayo (ngaphansi kuka-4 ºC) amabhaktheriya azophindaphinda ngokushesha aphule ubisi. Into engcono kakhulu ukuyenza ukushisa ubisi, futhi ngale ndlela uzokubulala noma yiziphi amagciwane angase abe kuwo.
Akudingekile ukuletha ubisi kumathumba njengoba lokhu kuzoshintsha ukunambitheka kobisi. Kodwa-ke, uma kubanjwe ku-63 ºC imizuzu engama-30, amabhaktheriya ayobulawa, kepha ukunambitheka nokudla okuyiyo ngeke kube yinto engashintshwa, uma kunjalo. Le nqubo ibizwa ngokuthi i-pasteurization. Imishini yesimanje yokushisa ishisa kuya ku-73 ºC imizuzwana engu-15.
Ukugcwalisa iziqukathi, ukuze uthole ubisi lwezimbuzi, kufanele zithengwe ngesimo esiyimpofu futhi zingabuyiselwa.
Ubisi olungasetshenzisiwe lungathululelwa epulasitiki oyinyumba noma amabhodlela okuglasi bese uphawulwe ngezingxenye eziphezulu ze-aluminium noma izigqoko zokugqoka. Ubisi olungasetshenzisiwe lungaphinda luhlanganiswe emagqabheni angenayo noma emabhokisini e-waxed. Amanani amancane obisi angagcwaliswa ngesandla, kodwa imiqulu emikhulu idinga umshini wokupakisha.